Mawkun – Page5– The First In-depth and Investigative Magazine in Myanmar
by Mawkun Team · Published October 12, 2017
တိုင်းဧရာအစိုးရ မေးခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့ လယ်ယာမြေအရေး
ရွှေကျွန်းသာ (စက်တင်ဘာ၊ ၂ဝ၁၇) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့အောက်ပိုင်း၊ ပင်လယ်ဘက်ကို မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် စက်လှေနဲ့ ဆင်းသွားတဲ့အခါ အနီရောင်ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဟိုနားတစ်ခု၊ ဒီနားတစ်ခု ထိုးထိုးထောင်ထောင် စိုက်ထူထားတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းကို တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေပေါ်မှာ ရေးထားတာကတော့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာ၊ တဲအိမ်ဆောက်တာ၊ ငါးဖမ်းတာ၊ ကဏန်းထောင်တာ၊ ဖြတ်သန်းသွားလာတာတွေ မလုပ်ဖို့နဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်တွေကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အမိန့်စာရဲ့ အောက်ဆုံးမှာတော့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကျော်ဆန်းကျော် (ပ/၄၂၄၉) ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ Photo – Kyaw Zayya ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကျွန်းရဲ့နာမည်က ရွှေကျွန်းသာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီကျွန်းဟာ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ဧက ခုနစ်ထောင်ကျော်ကျယ်ဝန်းပြီး ဒီအထဲက...
by Mawkun Team · Published October 11, 2017
ရာသီသုံးပါးတွင် ကျွန်တော် အမုန်းဆုံးက မိုးရာသီဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလုပ်တက်အလုပ်ဆင်း မိုးရွာထဲ လမ်းလျှောက်ရသည့် ဒုက္ခ၊ ကားတိုးစီးရသည့် ဒုက္ခကို မခံစားနိုင်၍ ဖြစ်သည်။ လမ်းလျှောက်နေတုန်း ကားများ မဆင်မခြင်မောင်း၍ ရေတွေ စင်ကုန်သည့်အခါလည်း ဒေါသထွက်ရသည်။ မိုးသည်းသည်းမှာ အဝတ်အစားတွေ ရေစိုသောကြောင့် လဲရသည်ကိုလည်း စိတ်ကုန်၏။ အဆိုးဆုံးက လူကျပ်ကျပ် ဘတ်စ်ကားထဲ ထီး ရေစို၊ လူရေစိုတွေနဲ့ ကားတိုးစီးရတာပဲ ဖြစ်သည်။ Illustration – MAUNG NOE ယခင် မထသခေတ်တုန်းကဆို ဘတ်စ်ကားတွေက ပြတင်းပေါက်မကောင်း၊ ခေါင်မိုးက မလုံ။ ကားပေါ်မှာတင် မိုးရေချိုးခဲ့ရသည်။ ယခုတော့ YBS အဲကွန်းကားတွေနှင့်မို့ မိုးလုံလေလုံတော့ရှိသည်။ သို့သော်မိုးရေစိုစိုနှင့် အဲကွန်း...
by Mawkun Team · Published October 10, 2017
မြို့ထဲမှာ အရုပ်တွေ ရောက်နေပြီ ဆက်ဆံရေးက နူးညံ့တယ် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ ဝတ်ထားတယ် မြန်မာစကားကို ပြောတယ် Illustration – Tin Min Aung လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ် မျက်လုံးတွေက မိုးပေါ်ကို ကြည့်တယ် အရုပ်တွေဟာ ညင်ညင်သာသာနဲ့ ရှေးဟောင်းကုလားထိုင်တွေပေါ်မှာ တက်ထိုင်တယ် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်ထဲက ကြောင်ကို ပွတ်သလို ရှေးဟောင်းကုလားထိုင်ကြီးကို ပွတ်တယ် ရှေးဟောင်းတွေ ရှေးဖြစ်တွေ ရှေးရှေးကနေ စလို့ အရုပ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကို ပြောတယ် အရုပ်တွေ ပြောတာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရုပ်လုံး ပေါ်လာတယ် လူဆိုတာ အရုပ်တွေကနေ ဆင်းသက်လာတာတဲ့ အရုပ်တွေက စကားပြော သိပ်ကောင်းတယ် ...
by Mawkun Team · Published October 9, 2017
အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် တအုံနွေးနွေး ရခိုင်အရေး
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် သဘာဝတရားက ပေးထားသည့် တောတောင်၊ ရေမြေ၊ သဘာဝသယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသော ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ထိုအရာများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့် ဒုက္ခမျိုးစုံကို ရခိုင်ပြည်သူလူထုက ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယ အဆင်းရဲဆုံး ပြည်နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏စာရင်းများအရ နေရပ်စွန့်ခွာဒုက္ခသည် တစ်သိန်းနှစ်သောင်းခန့်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထားရသည်။ Photo – Khin Maung Myint ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့နယ်တချို့တွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်းအေးချမ်းရေးတို့ ပျောက်ကွယ်လာနေပြီး လူထု၏ အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်လာသည့် အကြမ်းဖက်မှုများမှာလည်း တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူအချို့အသတ်ခံရသည်၊ အချို့ အသက်လုပြီး ထွက်ပြေးကြရသည်ဟု အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် တွေ့နေရသည်။ ၂ဝ၁၆ အောက်တိုဘာတွင်...
by Mawkun Team · Published September 26, 2017 · Last modified October 4, 2017
၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလထုတ်၊ မော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်း ထွက်လာပါပြီ (Mawkun October Edition Out Now!)
အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည်များကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ထားပြီး တင်ပြပုံ ဆန်းသစ်သည့် မော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်း October လထုတ် ထွက်လာပါပြီ။
by Mawkun Team · Published September 26, 2017
အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် တပ်မတော်တို့ စည်းလုံးချိန်တန်ပြီ
နိုင်ငံတကာက ကြည့်သည့်အခါ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို မကြည့်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်တစ်ခုတည်းက ကြည့်ပြီး ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချဖိအားပေးလျက်ရှိရာ အဆိုပါ အခြေအနေမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရေးအတွက် ယခုအချိန်သည် အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် တပ်မတော်တို့ စည်းလုံးကြရမည့် အရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
by Mawkun Team · Published September 25, 2017 · Last modified October 4, 2017
Despite Pressures, Myanmar Government Should Not Abandon Long-term Goals for Rakhine State
One should recall, nonetheless, that in the 1990s the “Rohingya”-denominated exiled organizations wanted to join the anti-military regime front of students and ethnic organizations.
by Mawkun Team · Published September 23, 2017 · Last modified October 4, 2017
ဒေါက်တာ ဂျက်ပီလိုက်ဒါ (ရခိုင်အရေးကျွမ်းကျင်သူ)နှင့် အင်တာဗျူး
အင်နဲ့အားနဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုတန်ပြန်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြဿနာတွေကို မျက်ကွယ်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူး၊ ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပဲဆိုတာကို အလေးပေးတဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးဗျူဟာတွေရှိရပါမယ်
by Mawkun Team · Published September 20, 2017 · Last modified October 4, 2017
ဒေါက်တာလွင်မာလှိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနဌာနခွဲ၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန နှင့် အင်တာဗျူး
လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေနဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေကတော့ အာဟာရ ချို့တဲ့ရခြင်းရဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
by Mawkun Team · Published September 11, 2017 · Last modified October 4, 2017
ကြောင်များ လူများ သက္ကရာဇ်များ
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ လောကကြီးက
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်နေကျဆိုတော့
ဒီအကြောင်းကို ဘယ်သူကမှ အထူးအဆန်းတစ်ခုလို ပြောမနေကြ
ကြာတော့လည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားကြ